Uhlelo lwe-Non-Standard Bearings Limited - Uhlelo lweRihoo (Hongkong) Co., Limited
I-Non-Standard Bearings Limited uhlelo lokunyakaza
Ukusetshenziswa kwamabherethi angajwayelekile
Umsebenzi wokubuthana ufana nokuthi indandatho yokumisa kanye neyindandatho ejikelezayo yokuthwala ibhekene ngokuhambisana nendawo eyimile (ngokuvamile isihlalo sokuthwala) sengxenye ephakanyayo kanye nengxenye ejikelezayo (ngokuvamile i-shaft), ukuze kutholakale ukudluliselwa yomthwalo kanye nokunyakaza okulinganiselwe esimweni esijikelezayo Umsebenzi oyisisekelo wesistimu ohlobene nendawo yesistimu. Esigodini nasesihlalweni sokuthwala, ukulethwa okugxilwe emgwaqweni omsakazo, we-axial no-tangential kulezi zindlela ezintathu zokulungisa isimo saso. Ukumiswa kwe-radial kanye ne-tangential kufinyelelwa ngokufakela okuqinile emasongweni okuthwala. Ukumiswa kwe-Axial kusetshenziselwa kuphela amacala ambalwa. Izingxenye ze-Axial limit, ezifana nama-caps wokugcina nama-storage, ngokuvamile zisetshenziselwa ukunciphisa isikhundla se-axial Ngaphakathi kobubanzi bokungena. Ngesikhathi esifanayo njengoba
Ukubeletha yingxenye ebalulekile yezingxenye zemishini, kungathiwa amajoyini, futhi thina bantu, uma kungekho okuhlangene okwanele, uma kungekho ohlangothini okhubazekile, futhi yimuphi indima? Akusizi ngalutho, umshini ufana, awunamandla, ukusetshenziswa kwemishini akusiyo, ngakho-ke umshini awuhlukaniswanga kusuka kuma-bearings, ushiya ama-bearings ebukhosini, kufana nokuchitha. Ukusetshenziswa kokuthwala kuyinkimbinkimbi kakhulu, kanti abanye badinga ukubambisana nokusetshenziswa kwezingubo zokugqoka, abasebenzi abasebenza ngobuchwepheshe ukuze bazi ulwazi, ngokuqinisekile asazi abantu abajwayelekile, siza lapha ukukutshela ngokusetshenziswa kokugubha izibhebhe nezidingo, kodwa futhi wazi kahle ngekusasa owaziyo isisekelo se-RBI.
Khetha ukubambisana kufanele uqaphele amaphuzu amane alandelayo:
(1) ukuphakama kwendandatho yokuzungeza kufanele kube namandla asezingeni elifanayo ukuze kuncishiswe i-deformation, futhi ingadlala ngokugcwele emandleni okuphatha. Ngesikhathi esifanayo njengoba
(2) isendlovu ekuhambeni kwayo ayikwazi ukufaka isilayidi esiqondisweni esiyinkimbinkimbi, ngaphandle kwalokho iyolimaza ubuso bokuhlangana. Ngesikhathi esifanayo njengoba
(3) ama-bearings wokuphela mahhala kumele akwazi ukuzivumelanisa nezinguquko ebude be-shaft kanye nokuthwala okubhekene nakho, okungukuthi, kumele kube nokukwazi ukuvumelanisa nesimo se-axial ngaphakathi kwezinga elithile lokubhukuda.
(4) kumele unake ukufakwa nokukhishwa kwezingubo ezilula, ugcine isikhathi nemali.
Ukulandelela i-roller bearings kakhulu